The Ab Presents Nepal » अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन हुने नेपाली टोपी दिवस किन नमनाउने ? टोपी दिवस यसरी भव्य रूपमा मनाउँदै , सबैलाई सम्मान गर्न अनुरोध !
काठमाडौ-: जागरुक युवा अभियान नेपालले विगत वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै छ । अभियानले विगत ७ वर्षदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष अर्थात् जनवरी १ का दिन अन्र्तराष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाउँदै आएको हो ।
गत वर्ष यस संस्थाले सबैभन्दा ठूलो आकारको नेपाली टोपी प्रर्दशन गरेको थियो । यो वर्ष पनि कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी सकिएको बताउँदै यसलाई सफल बनाउन अभियन्ताहरूले आम नेपालीलाई अनुरो